कोरोनासँग लड्न ‘बोल्ड’ निर्णय लिने तयारीमा सरकार
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसले यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म १८१ देशमा फैलिइसकेको छ ।
बिहीवार मात्र मध्य अमेरिकामा पर्ने केही देशहरूमा पहिलोपटक कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । विश्वभर करीब २०० देशहरू छन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा कतिपय उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै नेपाल कोरोनाबाट अछुतो नरहेको बताउने गरेका छन् ।
तर सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले प्वाक्क मुख भने फोर्न सकेका छैनन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा कोरोनाको संक्रमण छैन भनेर केही दिन अघिसम्म हामी ढुक्क थियौं तर हिजो र आजमा हाम्रो त्यो धारणा पूरै बदलिएको छ । हामी आजभोलिमा नयाँ रणनीति तय गर्दैछौं ।’
उनले केही दिनमा सरकारले ठूलो र बोल्ड निर्णय लिने खुलासा गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले १ साताअघि नै दक्षिण पूर्वी एसियामा कोरोना कुनै पनि बेलामा विस्फोटक ढंगबाट बाहिर आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
परीक्षण गर्ने किट नै छैन !
केही दिनअघि सरकारले परीक्षण नै नगरी संक्रमण नभएको दाबी गरेर जनतालाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालमा कोभिड १९ भाइरस आइसकेको दाबी गरेका छन् ।
डा. दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालमा भाइरस आइसकेको तर त्यसले रोगको रूप लिन बाँकी रहेको मेरो अनुमान छ । भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि बाहिर देखिन केही दिन वा हप्ता पनि लगाउन सक्छ ।’
डा. दीक्षितले कोरोना परीक्षण गर्ने किट नै नभएको आरोप लगाएका थिए । उनको दाबीलाई पुष्टि भने सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । बिहीवार एक दैनिक पत्रिकासँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले कोरोना परीक्षण किट जम्मा १ हजार ५०० वटाको हाराहारीमा रहेको बताएकी थिइन् ।
डा. दीक्षितले ५३० जनामा परीक्षण भइसकेको भए त्यो किटको संख्या १ हजार वटामा झरेको र त्यसलाई सरकारको तयारी भन्नै नमिल्ने दाबी गरे । ‘किट त रैनछ त !’ डा. दीक्षितले आश्चर्य प्रकट गरे, ‘१ हजार वटा किटले के हुन्छ ?’
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा कमसेकम १ लाख किट हुनुपर्ने बताए । ‘एकैचोटी हजारौंमा परीक्षण गर्नुपर्ने भयो भने के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले तत्काल किन्ने हो भने किन्नुपर्छ, नत्र माग्ने हो भने चीन, युरोप लगायतका देशबाट मागिहाल्नुपर्छ ।’
परीक्षणको दायरा बढाउँछौं – डा. महेन्द्र श्रेष्ठ, महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको बताए । कोभिड १९ संक्रमणको सम्भावना देखिएका जो कोहीलाई पनि परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको उनले लोकान्तरलाई बताए ।
‘हामीले हाम्रो परीक्षणको दायरा बढाउने भएका छौं,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘६० वर्षभन्दा माथिका तर यसअघि कुनै रोगको परीक्षण नभएकालाई कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका आधारमा तत्काल परीक्षण गर्नेछौं ।’ उनले निरन्तर खोकी लागिरहनेलाई पनि तत्काल परीक्षण गरिने बताए ।
डा. श्रेष्ठले नेपाल आउने भारतीयहरू अहिले निगरानीमा रहेको बताए । ‘हामीले भारतबाट आउनेहरूलाई निरन्तर निगरानी गरेका छौं, नेपाल भित्रिनेहरूको शतप्रतिशत स्क्रिनिङ गर्छौं,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘भारतबाट आउने संक्रमणबाट नेपाललाई जोगाउन सक्यौं भने हामी जोगिन्छौं ।’
डा. श्रेष्ठले भैरहवामा ६३ जनामा कोरोना देखियो भन्दै फैलिएको हल्ला सत्य नभएको बताए । ‘बरू सुनौली नाकाबाट ६३ किलोमिटर टाढा भारतमा १ जनामा संक्रमण देखिएको भन्ने हाम्रो सूचनामा आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले क्लोज अब्जरभेसन गरेका छौं ।’
भगवान् भरोसामा सरकार !
गत फागुन १९ गते नै आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले जहाजमा नेपाल आउनेहरू सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइने र सरकारले अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
तर व्यवहारमा ती निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार चैत १ गतेदेखि हालसम्म २० हजारभन्दा बढी विदेशीहरू नेपाल आएका छन् । ती कहाँ कसरी क्वारेन्टाइन बसेका छन्, सरकारलाई त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
चीनको वुहानबाट शुरू भएको मानिएको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुनुमा अन्तरदेशीय यात्रीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । इरान, इटाली लगायत युरोपका धेरै देशहरू र अमेरिकामा पनि बाहिरबाट आएकाहरूबाट नै संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ ।
संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउनेहरूलाई कडाइ गरेर तत्काल क्वारेन्टाइनमा लैजान जरुरी ठानेन ।
यद्यपि पछिल्लो केही दिनमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रोक्नेदेखि लिएर अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । डा. दीक्षितले ढिलै भएपनि सरकारले लिएका कदमहरू स्वागतयोग्य भएको बताए तर यतिले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘चीनबाट गएको बेलायती नागरिकले अस्ट्रेलियामा संक्रमण सारेको छ,’ डा. दीक्षितले भने, ‘यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले पहिला किन बुझ्न सकेनौं ?’ मैले यसअघि पनि बारबार भनिरहेको छु तर सरकारले ढिलो ।’